Amanqaku kaKyle Christensen malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UKyle Christensen
UKyle Christensen uyi-VP yeNtengiso yeMveliso e Iimpendulo Apho anoxanduva lokuqhuba isicwangciso sentengiso yemveliso kunye nokubekwa kwindawo yeMpendulo yokuNxibelelana nelifu lokuThengisa. Kutshanje, uChristensen ebenguMlawuli oyiNtloko woThengiso lweMveliso noLawulo eZuora, apho akhokele lonke uxanduva lokuthengisa imveliso kunye nolawulo lwezinto eziphambili ze-Z-Billing kunye ne-Z-Payments. Phambi kweZuora, uChristensen wasungula kwaye waqhuba intengiso yemveliso kwimigca emininzi ye-Salesforce.com, kubandakanya neNkonzo yeLifu kunye neDatha.com.
Amandla oThengiso lwaMntu ngamnye
NgoLwesibini, Septemba 17, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UKyle Christensen
Uyakhumbula xa uNike wazisa umkhankaso wayo Wenza nje? U-Nike ukwazile ukufezekisa ulwazi kunye neqondo lophawu olukhulu ngesi slogan silula. Iibhodi zebhodi, umabonwakude, unomathotholo, uprinta… 'Yenze nje' kwaye i-Nike swoosh yayikuyo yonke indawo. Impumelelo yeli phulo yayixhomekeke ikakhulu ekubeni bangaphi abantu uNike abanokukwazi ukubona nokuva lo myalezo. Le ndlela isetyenziselwe uninzi lweempawu ezinkulu ngexesha lokuthengisa ngobuninzi okanye 'ixesha lephulo' kwaye ubukhulu becala